Topnepalnews.com | देशलाई माया गर्ने मान्छेलाई भोट हालौं, जेठ १ गतेदेखि पछुताएर केही हुनेवाला छैन -प्रतिक ढकाल
देशलाई माया गर्ने मान्छेलाई भोट हालौं, जेठ १ गतेदेखि पछुताएर केही हुनेवाला छैन -प्रतिक ढकाल
Posted on: May 05, 2017 | views: 4140
धेरै साथीहरुले निराशाजनक टिप्पणी गर्दै लेखेको/बोलेको देखिन्छ - "सबै पार्टीहरु उस्तै हुन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको" इत्यादि ।
तपाईको यो भनाइसंग केही हदसम्म म आफैं पनि सहमत छु तर पूरै हदसम्म होइन । हो, सबै पार्टीमा केही असल मान्छेहरु पनि छन् तर ती अल्पमतमा परेका छन् र नेतृत्वसंग टक्कर लिन नसकेर खुम्चिएर बसेका छन् ।
कुन चाहि निष्ठावान कांग्रेसीलाई अहिलेको यो भाँडभैलो, न्यायको तेजोबध र यो लम्पसारवाद मन परेको होला र ? तर ती सबैको निष्ठा र बीपीको आदर्श अवसरवादी कांग्रेसीजनका अघाडि निरिह साबित भएको छ ।
हिजो सशस्त्र युद्धकालमा सबैभन्दा पीडित तिनै दूरदराजका कांग्रेसीहरु थिए तर आज एउटा अदृश्य शक्तिले तिनै गर्धन थाप्ने र मार हान्ने दुई शक्तिलाई एउटै कित्ता र 'बराबरी' को हैसियतमा उभ्याएको छ । चुनाब स्थानीय तहको हुदैछ, तर उम्मेदवारी परेको छ दिल्लीको स्वार्थको ।
प्रतिस्पर्धाका बाकस थापिएका छन् -नेपाललाई एउटा स्वाधीन राष्ट्रको रुपमा राख्ने कि 'मालिक' को जिम्मा लगाउने भन्ने पक्षहरुका बीचमा । यो देश कसको हो ? निर्णय हामी आफैंले गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने दुई कित्ताका बीचको ।
देशलाई माया गर्नु अब अघोषित रुपमा एउटा 'अपराध' साबित हुदै गएको छ । देश पूरै माफियाले चलाएको छ । हामी बाघ, गैंडा,सालक संरक्षणका कुरा गर्छौं - तर अब त सबै कुरा छोडेर देश संरक्षण गर्नु पर्ने बेला आइसकेको छ ।
देश छ र नै हाम्रो अस्तित्व छ, तर अब त देशै जिम्मा लगाउन आतुर शक्ति पनि सानो छैन । तिनीहरुसंग पद, पैसा, पावर सबैथोक छ । ती त भोलि पनि कतै गएर टापू किनेर बस्लान, जसरी मार्कोस बस्यो तर हामी सर्वसाधारण मान्छे कता जाने ?
त्यसैले यस्तो संगीन बेलामा सबैलाई एउटै नदेखौं ।
यो स्थानीय निर्वाचन हो - त्यसैले आफ्नै गाउँ, टोल र नगरलाई माया गर्ने मान्छेलाई भोट हालौं; यो देशलाई माया गर्ने मान्छेलाई भोट हालौं । भावी सन्ततिलाई पनि यो सगरमाथाको देश स्वतन्त्र र स्वाधीन नै हस्तान्तरण गर्ने सोच भएका व्यक्तिलाई जिताउन हामी सबै लागौं ।
चुनाब अन्धो पनि हुन्छ । १०० जना दाजुभाइको शक्ति भएर पनि 'कौरव' को बिनाश किन भयो ? एउटै कारण हो- ती लाछी ९९ ले कहिल्यै स्वेच्छाचारी दुर्योधनलाई ललकार्ने हिम्मत गरेनन् । त्यो एउटैले बाँकी ९९ लाई समेत डुबायो ।
यदि बाँकी ९९ ले सही चिन्हमा भोट हालेका भए शायद दुर्योधन पनि सच्चिन्थ्यो होला । पाण्डव संख्याका हिसाबले ५ मात्रै थिए तर सत्यका पक्षधर भएका कारणले भगवानको समेत साथ पाए ।
आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि जुन शक्तिले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई समेत गलहत्याउन सक्छ, त्यसैले तपाईलाई माया गर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो एउटा मीठो भ्रम बाहेक अरु केही हुने छैन । तसर्थ आजै सोचौं - तपाईको मालिक तपाई नै हो ।
सबैको कुरा सुन्नोस तर भोट हाल्न बन्दकोठामा पुगिसकेपछि एक पटक छातीमा हात राखेर र मनमा नेपाल आमालाई सम्झेर मात्र छाप हान्नुहोला । कतै तपाईको अमूल्य भोट देश विचलनको लाइसेन्स नबनोस । त्यसपछि त के हुन्छ र ? जेठ १ गतेदेखि पछुताएर केही हुनेवाला छैन ।